Ranjan Adhikari Chhetri – Page5– BIG FM 101.2 MHz
Home » Ranjan Adhikari Chhetri (page 5)
पोखरा घुम्न आएका १७ वर्षीय सुजनको भिरबाट खसेर मृत्यु
पोखरा घुम्न आएका एक युवकको भिरबाट अचानक खस्दा मृत्यु भएको छ । नवलपरासी जिल्ला घर भएका १७ वर्षीय सुजन गोले तामाङको भिरबाट खस्दा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको हो । सुजन गोर्खा भिजेल घुम्न गई फर्कने क्रममा पोखरा –२७ स्थित छत्रे ढुङगाको भिरबाट खसेको प्रहरी नायव उपरीक्षक गोविन्द पुरीले बताए। भिरबाट खसेर घाईते उनको उपचारको लागी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय …
आफै गाडी हाँकेर विन्ध्यवासिनी पुगे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र (तस्विरमा हेर्नुहोस्)
पोखरा । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिबेला पोखरामा छन् । औपचारिक कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक नगरिकनै उनी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भैरहेका छन् । शनिवार उनले विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा पुजा गरे । सवा ११ बजे पुजाको कार्यक्रम भनिएपनि उनी केही ढिलो गरि मन्दिर पुगेका थिए । पूर्वराजाले शनिवार विन्ध्यवासिनी आउजाउ गर्दा आँफैले गाडी हाँके । अघिपछि पूरै प्रहरीको स्कर्टिङ थियो । रातो ज्याकेटमा देखिएका …
पोखरा। पैसा साथमा भएन । बजार निस्कने समय भएन । अब चिन्ता लिनुपर्दैन । किस्ताकिस्तामा तिर्न मिल्ने गरी अनलाइन सपिङ स्टोर फेवाबजार डटकमले ई–कमर्स सुरु गरेको छ । त्यो पनि शुन्य ब्याजदरमा । उपभोक्ताहरुको व्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै घर घरमै सम्पूर्ण उपभोग्य सामाग्री पु¥याउने हेतुले सेवा सुरु गरिएको हो। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फेवाबजारको सेवा, सामान, गुणस्तर लगायतका विषयमा सञ्चालकहरुले जानकारी …
जनप्रतिनिधि नै ढुंगाबालुवा तस्कर, निकम्मा वडाध्यक्ष, त्रासमा स्थानीय
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ५ पुस । सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो । गाउँको सरकार गाउँमै बन्यो । तर, चुनिएका प्रतिनिधि विकासको साटो गाउँ विनाशमा लागेपछि स्थानीय जनताका लागि अर्को विडम्बना के हुन सक्छ ? कास्कीको सानो गाउँपालिका ‘रुपा गाउँपालिका’ मा जनप्रतिनिधि नै नदीजन्य पद्धार्थ तस्करीमा लागेका छन् । आफ्नो गाउँठाउँको श्रोत साधन मार्फत वडा, गाउँपालिकालाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने ठाउँमा कोहि आफै सम्पन्न बन्ने ध्याउन्नमा छन्, …
पोखरा महानगरका अस्थायी कर्मचारी आन्दोलित, दिनभरी काम ठप्प
पोखरा । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सोमबार कार्यालयको कामकाज ठप्प पारे । करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौति र कर्मचारी बीचमै विभेद गरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीले दिनभर कार्यालयको काम गरेनन् । ३३ वटै वडा र महानगरको मुख्य कार्यालयमा कामकाज बन्द गरिएको आन्दोलन कार्यक्रमका प्रबक्ता ध्रुव भट्टराईले …
काहूँ धरहरा महोत्सव जारी, डाँडा उक्लेर पोखरा दृश्यावलोकन गर्नेको भिड
तेस्रो काहूँ धरहरा महोत्सव जारी छ । अहिले महोत्स पुगेर त्यहाँको धरहराबाट पोखरा उपत्याका, हिम श्रृखंला हेर्नेको भिड बढेको छ । चिसो मौसमको बाबजुद पनि विभिन्न ठाउँबाट दर्शक महोत्सवस्थल पुग्ने गरेका छन् । उनीहरु आपसमा भेटघाट गर्दै महोत्सवमा रमाउने गरेका छन् । काहूँडाँडामा रहेको काहूँ धरहराबाट पोखरा लगायत आसपासको सुन्दर दृश्य तथा मनोरम हिमाल देख्न सकिने हुँदा पनि दर्शक महोत्सव …
बाटो छैन बाइक ! (फोटो फिचर)
साहसिक यात्रामा रुची राख्ने पोखरेली युवाहरु सिक्लेस पुग्दा गाउँले दंग परे । मान्छे समेत हिँड्न कठिन हुने सिढीं सिढीं भएका बाटोमा उनीहरुले बाइक कुदाउँदा सिक्लेसीहरु अचम्मित बने । ओजोन एक्स्पेडिसन नेपालमा आबद्ध युवाहरु यसरी जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्केका हुन् । आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी सिक्लेसको भ्यू प्वोइन्टसम्मै बाइक लगेर युवाहरु पोखरा फर्केका छन् । सिक्लेसबासीले ‘यस्तो बाटो नै नभएको ठाउँ किन …
पोखरा । पूर्व राजारानी ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाह पोखरा आएका छन् । बुद्ध एयरको विमानबाट उनीहरु साढे १२ बजे पोखरा आईपुगेका हुन् । शाहलाई पोखरा विमानस्थलमा भब्य स्वागत गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, शिवसेना नेपाल, नेपाली काँग्रेस विपी सहित पूर्व राजाका शुभचिन्तकहरुले फूलमाला र पञ्चेबाजाले स्वागत गरे । पूर्व राजा शाह विमानस्थलदेखि विरौटा चोकसम्म पैदल हिँडेर शुभेच्छुकहरुसँग भेटघाट …
पोखरा- पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सोमबार पोखरा आएका छन् । उनका साथ पूर्व रानी कोमल शाह पनि छिन्। निजी भ्रमणमा पोखरा आइपुगेका पूर्व राजारानीको पोखरा एयरपोर्टमा भव्‍य स्वागत गरिएको छ। विश्व हिन्दु महासंघ, राप्रपा, नेपाली काँग्रेस (वि.पि), शिवसेना नेपाल, धार्मिक संघसंस्था लगायत सयौं समर्थकहरु पूर्वराजारानीको स्वागतमा जुटेका थिए। विमानस्थल अगाडि स्वागतमा जुटेका समर्थकहरुले ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राण भन्दा प्यारो छ, राजा …
पोखरा । मिस तामाङ पोखराको चौथो संस्करण आगामी माघ १९ गते हुने भएको छ । बैदाम तामाङ सेवा समाज कास्कीको आयोजनामा हुने मिस तामाङ पोखरामा तामाङ समुदायका नारीहरुको अन्तरनिहित प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागेको हो । सोहि कार्यक्रममा लेकसाइडमा निर्माणधिन रिन्छिङ तोर्जेत तामाङ शान्ति गुम्बा सहयोगार्थ म्युजिकल फेष्टिभल आयोजना गर्ने भएको छ । …
Page5of 763« First...«34567 » 102030...Last »